Yini okufanele uyenze manje uma une-Galaxy Note 7? | Izindaba zamagajethi
Yini okufanele uyenze manje uma une-Galaxy Note 7?
AbakwaSamsung bamemezele izolo ukuthi ubungani beGalaxy Note 7 emakethe sebuphelileNgemuva kwezinkinga eziningi isibalo esikhulu samatheminali esibe nazo, ezaqhuma noma zasha umlilo ngaphandle kwesixwayiso nokubeka abanikazi bazo nabanye abantu abasondelene nabo engozini enkulu.
Njengoba sichazile izolo ngokuningiliziwe, inkampani yaseNingizimu Korea imise ukwenziwa kwefulegi layo elisha, yahoxisa i-terminal ekuthengisweni futhi yamemezela nokuthi izoqoqa wonke amayunithi athengisiwe kuze kube manje. Manje kuvela ukungabaza ngalokho abanikazi be-Galaxy Note 7 okufanele bakwenze, kepha ungakhathazeki ukuthi kule ndatshana sizozama ukuxazulula konke ukungabaza kwakho.
1 AbakwaSamsung bafuna ukubuyisa wonke amayunithi weGalaxy Note 7 akhona emakethe
2 Kuthiwani uma ungafuni ukubuyisa idivayisi yakho?
3 Imibono ngokukhululeka; AbakwaSamsung kufanele bavale le nkinga ngokushesha okukhulu
AbakwaSamsung bafuna ukubuyisa wonke amayunithi weGalaxy Note 7 akhona emakethe
Akakakwenzi okusemthethweni okwamanje, futhi konke esikwaziyo kungenxa yamahemuhemu noma ukuphawula okuvela kwezinye zezikhulu eziphezulu zeSamsung Mobile, kepha umbono wokuthi inkampani yaseNingizimu Korea ukuthola ngokuphelele wonke amayunithi weGalaxy Note 7 akhona emakethe. Ngalokhu usuvele udale ikhithi yokutakula esivele ithunyelwa kubo bonke abasebenzisi.
Leli kit liqukethe ibhokisi elifakwe ngaphakathi kwe-thermally lapho kufanele sifake khona iselula ngamagilavu ​​akhethekile. AbakwaSamsung abasafuni zinkinga ngalokho obekuzoba yithuluzi labo elihamba phambili ekupheleni konyaka kepha kube ukwehluleka okukhulu.
Uma uneGalaxy Note 7 oyiphethe, ngokuqinisekile uzothola eyodwa yalezi kungekudala kits ukubuyisa ukuphela. Mayelana nabahlinzeki nabasabalalisi bezingcingo eziphathwayo, sebenayo vele i-oda lokuthi bangamakethi nganoma yimaphi amayunithi abanawo.
Kuthiwani uma ungafuni ukubuyisa idivayisi yakho?
Abasebenzisi abaningi sebekhulumile ngokusebenzisa izinkundla ezahlukahlukene zamaselula futhi bakuqinisekisa kwabo inhloso yokugcina i-Galaxy Note 7 yakhoYize kubonakala sengathi iSamsung ngeke ikuvumele lokhu ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, ngoba yize ingozi yokuqhuma noma umlilo ingekho kakhulu, ikhona.
Ngiyithanda kakhulu le foni kangangokuba angifuni ukudlula ebunzimeni bokusetha enye ifoni eyonakele - CantSeeShit
Angifuni ukubuyiselwa imali yami. Ngifuna Inothi 7. Isikhathi. Kuyinto edlula zonke kimi. Ayikho enye esondela, angikwazi ukubheka enye ifoni Ingozi yokuhlaselwa njalo ekuseni iba nkulu lapho nginqamula indawo yokupaka ngiya emsebenzini - eRaduque
Angikwazi ukuma ifoni ngaphandle kweNothi, futhi ukuthola iNothi 5 akusizi ngalutho lapho i-8 iza maduzane - iBlubbingMonkey
Ngingaphila ngaphandle kokuloba. Kepha ngikhombise enye ifoni enesikrini se-AMOLED emzimbeni omncane kangaka onamafreyimu acishe angabikho. Yenze ingangeni manzi, yiba ne-micro-SD ne-USB-C. Anginandaba noma ngabe bayishintsha kaningi ngangokunokwenzeka. Ngincamela ukushintshela ku-iPhone kunokuhamba nenye i-Android. - Ukhohlwe0t
Sicabanga ukuthi iSamsung kuzodingeka ukuthi ngandlela thile inxephezele bonke laba basebenzisi, ukubenza bakholwe ukuthi kufanele babuyise i-Galaxy Note 7 yabo, kepha ngaphandle kokungabaza ngeke kube umsebenzi olula. Izindaba ezinhle zenkampani yaseNingizimu Korea ukuthi awekho amayunithi amaningi kakhulu emakethe namuhla.
Imibono ngokukhululeka; AbakwaSamsung kufanele bavale le nkinga ngokushesha okukhulu
Uma une-Galaxy Note 7, kufanele ulinde ukuthola ikhithi yokutakula evela kwa-Samsung, ukuze uyithande noma ungathandi, buyisela iselula yakho futhi ungazibeki engcupheni yokuqhuma okungenzeka. Futhi ngalokhu uzokwenza izinto zibe lula kakhulu enkampanini yaseNingizimu Korea okufanele izame ukuvala lolu daba ngokushesha okukhulu, ukuze zama ukunqoba le nkinga enkulu bese uqala ukucabanga ngekusasa lapho sekuvele khona ukwethulwa kwe-Galaxy S8 entsha, okuthi yize kunezinkinga zeNothi 7 ezingeke zingene emakethe kuze kube unyaka olandelayo ka-2017 nangaphakathi kohlaka lwe-Mobile World Congress.
ESpain ababaningi kakhulu abasebenzisi abasebenzisa i-Galaxy Note 7, kodwa uma ube nenhlanhla yokuyithola, usuvele unayo imiyalo yokwazi ukusebenzisana ne-Samsung futhi ubuyisele i-terminal, futhi kusiza ukuvala le nkinga , ukukusiza endleleni, ukuvimbela eyodwa yalezi zinsimbi ekuqhumeni ezandleni zakho.
Ungomunye wabasebenzisi abaningi ongathandi ukubuyisa i-Galaxy Note 7 yakho esanda kuthengwa?. Sitshele isikhundla sakho maqondana nalokhu esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Yini okufanele uyenze manje uma une-Galaxy Note 7?
UCristian Quercia Borie kusho
Bekulindelekile ... Ngemuva kokuthi kukhishwe u-s2 no-s3 emakethe, ngokubona ukuthi ibhethri ligcine amahora ama-2 kuye kwayi-3, uhlelo lokusebenza luye lwaphahlazeka lapho luvula izinhlelo ezimbalwa ngasikhathi sinye futhi lungakwazi ukuthatha isithombe esigxile , Ngabona ukuthi umthala kwakuwukukhangisa okumsulwa. Ngishintshele ku-nokia ngewindows phone, ixazululwe inkinga futhi ngisamangazwe indlela abantu abakhala ngayo ngemiphumela emibi yezingcingo ze-android kepha bayaqhubeka nokuzidla, izingcweti zokukhangisa
Phendula uCristian Quercia Borie
Awukwazi ukuthi WRONG more. Ngine-S7 EDGE. Ibhethri lihlala izinsuku ezintathu. Bengiphethe i-S, S3 ne-S3. Kusuka ku-S5 baba kubi kakhulu .. i-S3 lousy. Kepha iS5edge ukuqhuma.
Futhi ngicabanga ukuthi i-Kumbuka7 ngabe nayo nayo ukube bekungekhona ukukhathazeka okuyisiphukuphuku kokubenza babe bancane futhi babe mncane ... kwaba yisikhathi ngaphambi kokuba enye inkampani ibhalwe. Futhi i-Samsung ne-Apple banamavoti wonke
Simply ifoni ekhangayo ngazo zonke izindlela. Kumele nje uyiphathe ezandleni zakho bese uyisebenzisa ukuze uyibone futhi uma unenhlanhla eyanele yokuba nayo isikhathi eside lowo muzwa uyaqinisekiswa.
Kuyihlazo langempela ukuyibuyisa. Kepha ngizolinda i-S8 noma yini ofuna ukuyibiza ngayo.
UCarlos Alonso kusho
Ngingumnikazi weNote7 futhi iyamangalisa. Kuyihlazo langempela lokho kwehluleka okukhulu. Ngibe noNothi 2. Futhi nawe ube ucingo oluhle kakhulu. Ipeni kimi liwusizo olukhulu. Ngokusemandleni ami ngizobheja kwiNothi. Ngiyaxolisa ukuthi bathathe umsakazo we-FM.
Phendula uCarlos Alonso
Ngivela kwaSamsung futhi ngiyimilutha yokwazi, ngiyithathe nge-prebenta la caixa futhi namhlanje bangitshele ukuthi iSamsung inginika i-smart tv.ole, yize ngisele ngaphandle kwenothi lami 7
Nginayo eyodwa engiyithengile kuwebhusayithi yakwa-samsung. Nami ngijabule kakhulu ngayo, kepha sengikubizile ukuthi ngiyithathe futhi abanginikeli i-TV noma eminye imininingwane efanayo ... Buyisa kuphela noma shintshanisa onqenqemeni lwe-S7 noma lwe-S7 + umehluko ...
I-FIFA Mobile 2017 isiyatholakala kumadivayisi we-iOS ne-Android
IMicrosoft iqala ukuthengisa izibuko zeHololens emazweni amaningi